U-Edson Glauber-AmaXesha avuthiweyo-Ukubalwa ukuya eBukumkanini
Inenekazi lethu ukuze	Edson Glauber nge-2 kaJuni, 2020:
Nyana wam, baninzi abaya kutshutshiswa, kodwa ungoyiki nto. * Zinikele mihla le kukhuseleko lweNkosi, kuba ikholekile ukusindisa abo bakholwayo, ngobudenge bokushumayela. Uninzi luya kubiza ngokuba usisidenge kwaye lubuthathaka, kodwa khumbula, bantwana bam, ukuba ubudenge bukaThixo bulumke ngakumbi kunobulumko babantu, kwaye nobuthathaka bukaThixo bunamandla ngaphezu kwamandla abantu. Uhlala enyula izinto ezibonakala zibubudenge ehlabathini ukuze ahlazise izilumko, anyule nezinto ezibuthathaka zehlabathi, ukuze ahlazise abanamandla. Abona bazezona zibalulekileyo kulo mhlaba, ezona zidelekileyo, kwaye abo bengenguye umntu baya kunciphisa abo [umntu] bangabinanto, ukuze kungabikho namnye uqhayisayo phambi kwakhe.
Eli lixesha lokuba usebenzise izixhobo ezona zixabisekileyo kolu dabi lukhulu lokomoya phakathi kokulungileyo nokubi: i-Ekaristi, iLizwi likaThixo, iRosary kunye nokuzila ukutya-okwenziwe luthando-njengesenzo sokuziphindezela kunye nokuguquka kwezono zakho kunye izono zehlabathi.
USathana wenza ngokukrakra, efuna ukunciphisa iCawe eNgcwele, kuba uyivumele ngokungamameli kum kwaye ungazenzi izicelo zam. Uyakuthatha nini isigqibo sokumamela kwaye ukholelwe amazwi am njengoMama oxhalabele kakhulu ulonwabo lwakho kunye nosindiso lwakho lwaphakade? Intliziyo yam eNgenakuzenzekelayo yenzekile kwaye yopha ngenxa yokungakholelwa, ukungathobeli kwakho kunye nokuba lukhuni kwentliziyo.
Mamela ilizwi lo Nyana wam uYesu, bantwana bam abancinci: bathobeleni ubizo lwaKho olungcwele kwaye niyenze yonke into anixelela yona, ngam, uMama yenu Engumbele. Nguye onibizayo ngam.
Guqula, kuba eli lixesha, ngaphambi kokuba imihla ive ubunzima, kunye nezilingo ezikhulu ngakumbi kwaye ezibi kakhulu, ngokuguqula kube nzima kwabaninzi.
Umama osikelelekileyo wandixelela ezinye izinto zobuqu, emva koko wathi kum:
Uninzi alukuqondi ukubaluleka kobukho bukaJoseph umlingane wam *** kunye namandla okuthethelela kwakhe kula maxesha akhoyo kwiCawa eNgcwele nakwilizwe liphela, kodwa xa iimfihlo ziqala ngeziganeko ezikhulu eziza kwenzeka, omnye emva enye, amehlo abantu abaninzi aya kuvula, kwaye baya kusiqonda isizathu sokuba iNkosi icele wonke umntu ukuba athande kwaye ahlonele uJoseph oNgcwele, azibeka phantsi kweNgcwele eNgcwele yenkuselo kayise. Niyabona, ixesha lisondele. Guqula, Guqula, Guqula!
Inqaku lomguquli: yonke le ndawo kufuneka iqondwe ngokukhanya kwe-1 kwabaseKorinte 1: 20-29, ecatshulweyo okanye ekubhekiswa kuyo kwiindawo ezininzi:
Uphi na lowo ulumkileyo? Uphi umbhali? Uphi umphikisi weli xesha? Ngaba uThixo akasenzi bube bubulumko behlabathi? Kuba, ebulumkweni bukaThixo, ihlabathi alamazi uThixo ngobulumko, wagqiba kwelokuba, ngenxa yokushumayela iindaba ezilungileyo, ukuba ndisindise abo bakholwayo. Kuba amaJuda afuna imiqondiso namaGrikhi anqwenela ukuba nobulumko, kodwa thina sivakalisa uKrestu ebethelelwe emnqamlezweni, esisikhubekiso kumaJuda nobudenge kwiiNtlanga, kodwa ke kwabo babiziweyo, amaJuda kwanamaGrike, uKrestu ungamandla kaThixo nobulumko bukaThixo. Kuba into kaThixo ebubudenge ilumkile kunobulumko, Kwaye nobuthathaka bakhe bomelele kunamandla omntu. Qwalasela ubizo lwakho, bazalwana noodade: ababaninzi ababenobulumko ngokwabantu, ababaninzi abanamandla, ababaninzi ababengazalwanga. Kodwa ke yena uThixo ubanyule ngobudenge ehlabathini ukuze ahlazise izilumko. UThixo wanyula izinto ezibuthathaka ehlabathini, ukuze ahlazise abanamandla. UThixo unyule izinto ezisezantsi nezidelekile ehlabathini, izinto ezingekhoyo, ukuze aziphuthise izinto ezinje, ukuze kungabikho namnye unokuqhayisa ebusweni bukaThixo. (INguqulelo ye-New Revised Standard Version yamaKatolika)
*** Funda: Ixesha le-St. Joseph NguMark Mallett
* Bukela Ungoyiki! nabaxhasi bethu,
UMark Mallett kunye noProfesa Daniel O'Connor:
← UJennifer -Ukutyhileka ku…
Unxibelelwano kwisandla? Icandelo XNUMX →